ဝဋျလညျခွငျး – My Blog
စနေ၊ တနင်ျဂနှေ နှဈရကျလုံး ပနျးနုမှာ အခနျးထဲတှငျ ပိတျခံထားရပွီး ဦးမွအောငျနှငျ့ ကြျောနိုငျ၏ မညှာမတာ မုဒိနျးကငျြ့ခွငျးကို ခံရ သညျ။ တနင်ျလာနေ့ နံကျ စောစောတှငျ ဦးမွအောငျထံ ဝငျလာသော phone ကွောငျ့ ဦးမွအောငျတို့နှဈယောကျသား ပြာယာ ခပျ နသေညျ။ ဒျေါညိုတို့ စီးသှားသော ကားသညျ လမျးတှငျ တိမျးမှောကျကာ ခရီးသညျအားလုံး ပှဲခွငျးပွီး သဆေုံးသှားသညျ။ စုစုကို ချေါကာ ဦးမွအောငျတို့ ခကျြခွငျး လိုကျသှားသညျ။ မိခငျအတှကျ ပူဆှေး သောကရောကျသျောလညျး လကျရှိ အခွအေနမှေ လှတျမွောကျရနျ ပနျးနု ကွိုးစားရပွီ။ တံခါးအား အပွငျမှ သော့ခကျထားသဖွငျ့ ပွူတငျးပေါကျ မှနျကို ခုံနှငျ့ ရိုကျခှဲလိုကျသညျ။ အိပျ ယာခငျးနှငျ့ ဆောငျမြားကို ကွိုး အဖွဈ အသုံးပွုကာ အပျေါထပျမှ တှဲလောငျးခို ဆငျးခဲ့သညျ။ ဖိနပျပငျ မဝတျနိုငျဘဲ ခွဦေးတဲ့ရာ ပွေးထှကျခဲ့သညျ။ ပနျးနု ဘယျကို သှားရမညျ မသိ။ မသနျ့စငျတော့သညျ့ မိမိ၏ ခန်ဓာကိုယျအား ခဈြရသော မောငျမောငျ့ထံ အပျနှံဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပေ။ မကျြရညျ စကျလကျဖွငျ့ ခွဦေးတညျ့ရာ ပွေးနစေဉျ
“ပနျးနု၊ ညီမလေး” “ဟငျ မမ၊ မမမလှေငျ” “အို ပနျးနု ပနျးနု” သူမအား ညီမလေး တဈယောကျလို ခဈြသော Speaking သငျတနျးဆရာမ မလှေငျ၏ ချေါသံသဲ့သဲ့သာ ကွားလိုကျရသညျ။ ရငျခှငျထဲ ပွေးဝငျလာရငျး သတိလဈသှားသော ညီမအရငျးလို ခဈြရသော ပနျးနု၏ ခန်ဓာကိုယျလေးအား ပှထေ့ားရငျး မလှေငျ တကြျောကြျော အျောချေါနမေိသညျ။ မလှေငျငှားထားသော လုံးခွငျး တိုကျ၏ အိပျခနျးထဲတှငျ မလှေငျ့အား ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျငိုရငျး ပနျးနု ဖွဈပကျြခဲ့သမြှကို ရငျဖှငျ့နသေညျ။ “တောကျ!!!! ယုတျမာလိုကျကွတာ၊ တိတျတော့ ညီမလေး၊ မမတို့ လောကကွီးမှာ ရှရှေ့ောကျ ရငျဆိုငျရမှာတှေ အမြားကွီး ကနျြသေးတယျ၊ ဘာ မှ အားမငယျနဲ့၊ မမနဲ့ဘဲနတေော့၊ ညီမလေးကို မမ တဈသကျလုံး ကာကှယျပေးမယျ ဟုတျပွီလား” ရငျခှငျထဲ ငိုရှိုကျနသေော ပနျးနု ခေါငျးကို ပှတျသပျရငျး နှဈသိမျ့နသေညျ။
ကြျောနိုငျ–ကြျောနိုငျ၊ ငါ့ ဘဝကို ဖကျြစီးရုံ မကဘူး၊ အခု ငါ့ ညီမလို ခဈြရတဲ့ ပနျးနု ဘဝလေးကိုပါ နငျးခလြေိုကျကွပွီ၊ ဒငျးတို့ တဈနေ့ ဝဠျလညျဦးမှာပါ – မလှေငျ ပနျးနုအား နှဈသိမျ့ရငျး လှနျခဲ့သော သုံးနှဈက အဖွဈအပကျြကို ပွနျလညျ သတိရမိသညျ။ မလှေငျ အသကျ 23 နှဈတှငျ E Major နှငျ့ ကြောငျးပွီးကာ Speaking သငျတနျးပါ ပွီးသှားသဖွငျ့ ပွငျဦးလှငျမှ မန်တလေးသို့ အလုပျရှာရနျ ဆငျးလာသညျ။ ထိုသို့ အလုပျရှာနစေဉျ state ကြောငျးတုံးက တဈကြောငျးထဲသားခွငျး ဖွဈသူ ကြျောနိုငျနှငျ့ စုံသညျ။ ထိုစဉျက ကြျောနိုငျ ဘာတှေ လုပျနသေညျကို မလှေငျမသိခဲ့ပေ။ ကြျောနိုငျကလညျး မှောငျခို ကိစ်စအတှကျ နိုငျငံခွားသား တဈဦးနှငျ့ အလုပျ လုပျရနျ ကမျးလှမျးထားသညျ။ ထို နိုငျငံခွားသားက packing ဖှငျ့ခွငျသညျဟု တောငျးဆိုလာသဖွငျ့ ဖါခေါငျးမြားနှငျ့ ခြိတျ ဆတျရာ အစဉျမပွနေခြေိနျတှငျ ကြောငျးနဖေကျ ဖွဈသော မလှေငျဆိုသညျ့ မအူမလယျ မိနျးမလှလေးတဈယောကျက အလုပျရှာပေးရနျ ပွောဆိုလာသဖွငျ့ ရကေနျအသငျ့ ကွာအသငျ့ ဖွဈသှားသညျ။
“နငျက speaking ရတယျဆိုတော့ အလုပျတဈခုရှိတယျဟ” “ဘယျလို အလုပျမြိုးလညျး ကြျောနိုငျ” “Company တဈခုက နိုငျငံခွားသားက secretary တဈယောကျ ရှာခိုငျးထားတယျဟ၊ နငျ လုပျလို့ အစဉျပွမေလား”“လစာက” ကြျောနိုငျ လကျသုံး ခြောငျး ထောငျပွလိုကျသညျ။ “အဲ့ဒီ အထကျမှာဘဲ၊ စာခြုပျတော့ ခြုပျရလိမျ့မယျ” “Bond က ဘယျနှဈလလညျး” “သုံးလ ခြုပျရ မယျ” “လုပျမယျဟာ” “Ok လေ၊ နငျ အလုပျရရငျ ငါ့ကို တဈဝိုငျးနျော” “အေးပါဟယျ၊ အလုပျသာ ရပါစဦေး” “အေး ဒါဆို ငါ မနကျဖနျ ပွောပေးမယျ၊ နငျ့ ဖုနျးနံပါတျ ပေးထားလိုကျ” “09————-“ Foreigner နှငျ့ interview ပွီးနောကျ လစာ5သိနျးရ မညျ ဆိုသဖွငျ့ မလှေငျ အပြျောကွီး ပြျောနသေညျ။ Bond စာခြုပျ သကျတနျးကို သုံးလ သတျမှတျလိုကျသညျ။ အပြျောလှနျနေ သဖွငျ့ စာခြုပျကို အပျေါဆုံး တဈစုံသာ ဖကျပွီး အောကျက နှဈစုံအား သခွောမဖကျဘဲ မလှေငျ လကျမှတျ ထိုးလိုကျသညျ။ Foreigner ကတော့ အခြိုးအစား ပွပွေဈလှနျးသော မလှေငျ့ အား ခွဆေုံး ခေါငျးဆုံးကွညျ့ကာ တံတှေးမြိုခနြသေညျ။
အလုပျစဆငျးရနျ ရခြေိုး အလှပွငျပွီး ကြျောနိုငျ လာအချေါကို စောငျ့နသေညျ။ အပျေါပိုငျး Shirt အကငြ်္ီ အဖွူနှငျ့ ဒူးထိ ဖုံးသော စ ကပျ ဘေးကှဲ အနကျကလေး ဝတျထားသညျ။8:00 am တှငျ ကြျောနိုငျ ကားတဈစီးဖွငျ့ လာချေါသညျ။ မနကေ့ Interview သညျ့ တိုကျသို့ ရောကျခဲ့ကွသညျ။ “please, sit down” (နိုငျငံခွားသားနှငျ့ ပွောသညျ့ စကားမြားအား သာဂိ မရေးတကျသဖွငျ့ မွနျမာလို ရေးသားလိုကျသညျ။ ငိငိ) ဧညျ့ခနျးထဲရှိ ထိုငျခုံပျေါတှငျ ထိုငျလိုကျစဉျ ကြျောနိုငျနှငျ့ နိုငျငံခွားသား တီးတိုးပွောဆိုကာ အပျေါထပျသို့ တကျသှားသညျ။ 10 mins ခနျ့ကွာသျော ကြျောနိုငျ ပွနျရောကျလာကာ “ကဲ မလှေငျရေ၊ ရုံးခနျးက အပျေါထပျမှာ၊ လိုကျခဲ့လိုကျ” မလှေငျလညျး ကြျောနိုငျ နောကျသို့ လိုကျခဲ့သညျ။
အခနျးကယျြကွီး တဈခုထဲ ဝငျသှားသညျ။ အခနျး ဖှဲ့စညျးပုံမှာ ရုံး ခနျးနှငျ့ မတူဘဲ မိသားစု အိပျခနျးကယျြ ပုံစံမြိုး ဖွဈနပွေီး မှယေ့ာအကွီးတဈခု ဖွနျ့ခငျးထားသညျ။ စကျတီခုံ တဈစုံသာ ရှိပွီး အလုပျစားပှဲ မတှရေ့သဖွငျ့ “ကိုကြျောနိုငျ အလုပျခနျးက ဘယျလိုကွီးလဲ” “ဂြောကျ” “ဟငျ!!!! ရှငျ ရှငျ ဒါဘာလုပျတာလညျး” ကြျောနိုငျ အခနျးတံခါးကို lock ခလြိုကျသဖွငျ့ မလှေငျ ထိတျလနျ့သှားမိသညျ။ နိုငျငံခွားသား ကလညျး တဘတျရှညျကွီး ခါးမှာ ပတျကာ အပျေါပိုငျး ဗလာနှငျ့ ရခြေိုးခနျးထဲမှ ထှကျလာသညျ။ “ဒါက မငျးအတှကျ အလုပျခနျးလေ မလှေငျရဲ့ ဟဲဟဲဟဲ” “ဒါ ဒါက ဘာသဘောလဲ ကိုကြျောနိုငျ” “ဘာသဘောမှ မဟုတျပါဘူး မလှေငျရယျ၊ စာခြုပျထဲက အတိုငျး မငျး ဆောငျရှကျပေးလိုကျ ရငျ အစဉျပွပေါတယျ” ကြျောနိုငျ ပဈပေးသော စာခြုပျအား ကွညျ့ပွီး မလှေငျ မကျြလုံး ပွူးသှားသညျ။ သူမ ကိုငျထားသညျ့ စာခြုပျက အလုပျခနျ့အပျခွငျး စာခြုပျ မဟုတျဘဲ လကျထပျ စာခြုပျကွီး။ သတို့သမီးနှငျ့ သတို့သား နရောတှငျ မလှေငျနှငျ့ Foreigner လကျမှတျကွီး။ အသိသကျသနှေဈဦးလညျး ပါသညျ။
သှားပွီ။ မလှေငျ မကျြလုံးတှေ ပွာသှားသညျ။ “ဒါ!!! ဒါ ဟို စာခြုပျ မဟုတျဘူး” “လကျမှတျကတော့ မငျးလကျမှတျ အစဈပါကှ” “နငျ နငျ သကျသကျမဲ့ ယုတျမာတာ ဖယျစမျး” သူမဘဝ ဘာဖွဈတော့မညျကို သိသဖွငျ့ ကြျောနိုငျ့အား တှနျးကာ တံခါးပေါကျစီ ပွေးသညျ။ ကြျောနိုငျ မလှေငျ့ လကျမောငျးကို လှမျးဆှဲလိုကျသညျ။ “ဘယျပွေးမလို့လညျး မလှေငျရယျ၊ ဟိုမှာ ရဈခကျြက သတို့သမီး အသဈစကျစကျလေးနဲ့ ပြျောပါးဖို့ အစဉျသငျ့ ဖွဈနပွေီ” “ဖွနျးးးး အ” ကြျောနိုငျ့ ပါးအား လကျဝါးဖွငျ့ ရိုကျလိုကျသညျ။ “အော နငျက ငါ့ကို ရိုကျတယျပေါ့ ကဲကှာ ကဲကှာ ဖွနျးဖွနျးဖွနျး အားးးး” မလှေငျ မှယေ့ာပျေါ လဲကသြှားသညျ။ “ရဈခကျြရေ ဆုတျပကျြသှားအောငျ တှယျစမျးကှာ အဲ့ကောငျမကို” ရဈခကျြလညျး မှယေ့ာပျေါ ခှခှေလေေး ဖွဈနသေော မလှေငျ့ ခွထေောကျ အား ဆှဲလိုကျသညျ။
“ခှေးကွီး လူယုတျမာကွီး လှတျ ငါ့ကို လှတျစမျး အီးးဟီးးဟီးးး” ရဈခကျြ ရငျဘကျအား ခွထေောကျဖွငျ့ ကနျကာ ရုံးသညျ။ မေ လှငျ လူးလညျးထကာ ရငျခကျြ ရငျဘကျအား လကျသညျးဖွငျ့ ကုပျဖဲ့သညျ။ “ဖွနျးဖွနျးဖွနျး အားးးး” ရဈခကျြ၏ လကျဝါးက မေ လှငျ့ ပါးပျေါ ဘယျပွနျ ညာပွနျ ကလြာသညျ။ ကြျောနိုငျက မလှေငျ့ လကျနှဈဖကျအား ထိနျးခြုပျကာ ဒူးဖွငျ့ ဖိထားသညျ။ ပွီးနောကျ မလှေငျ့ ဆံပငျအား စုပျကိုငျကာ “ငါတို့ လုပျတာ အသာတကွညျ ငွိမျ မခံရငျ အသားနာလိမျ့မယျ မလှေငျ၊ ပွီးတော့ လကျထပျ စာခြုပျကွီး ရှိနတေော့ နငျ မုဒိနျးမှုနဲ့ တရားဆှဲလညျး အလကားဘဲ ဟားဟားဟားဟားးး” “လူယုတျမာတှေ၊ လှတျ ငါ့ကိုလှတျ အီးး ဟီးးဟီးးးဟီးးးး” “ဗြိဗြိဗြိဗြီးးးးးး အ မလုပျပါနဲ့ မလုပျပါနဲ့ အမရေယျ ကယျပါဦးးး အီးးဟီးဟီးဟီး” ရဈခကျြ ဆုတျဖွဲလိုကျသဖွငျ့ စကပျအတိုလေး စုတျပွဲသှားသညျ။ အောကျခံဘောငျးဘီ အနီရောကျလေး အောကျတှငျ မို့ကွှနသေော စောကျဖုတျ ဖေါငျးဖေါငျး လေးက သှားရညျ ယိုစရာပငျ။ လကျနှဈဖကျကို ကြျောနိုငျ့ဒူးဖွငျ့ ဖိထား၍ မလှေငျ ရုံးလို့ မရပေ။ သူမဘဝ ရတေိမျနဈတော့မညျ။
“ဗြိဗြိဗြိဗြီးးးး အားးးး မလုပျနဲ့ မလုပျပါနဲ့ အီးဟီးဟီးဟီးးး” ရှဈ အကငြ်္ီ အဖွူလေး ကယျြသီးမြား ပွုတျထှကျကာ အကငြ်္ီလညျး ပွဲ သှားသညျ။ ဘယာစီယာ အဖွူလေးအား အလညျမှ ကိုငျကာ ဆှဲစောငျ့ပွီး လှငျ့ပဈလိုကျသညျ။ “အားးး အမရေေ ကယျပါဦးးး လူယုတျမာတှေ လှတျလှတျ အီးဟီးဟီးဟီး အ အ နာတယျ နာတယျ” ဖွူဝငျးမို့မောကျသော နို့အုံ မာကဈြကဈြလေးအား ရဈခကျြ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျကာ အားရပါးရ ဖဈြညှဈလိုကျသဖွငျ့ မလှေငျ့ မကျြနာလေး နာကငျြမှုကွောငျ့ ရှုံ့မဲ့သှားသညျ။ “အားးးးး နာတယျနာတယျ အီးးဟီးဟီးဟီး” ရဈခကျြက နို့အုံနှဈဖကျအား ကွမျးကွမျးတမျးတမျး စုပျကိုငျ ဖဈြညှဈရငျး နို့သီးခေါငျးမြားကို ဆှဲလိမျလိုကျသညျ။ နို့ကိုငျ၍ အားရသျော အောကျခံဘောငျးဘီအား ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။
“မလုပျနဲ့ မလုပျပါနဲ့ အားဟားးဟား” မလှေငျ အျောဟဈ ရုံးကနျရငျး ဘောငျးဘီလေး ကြှတျသှားပွီး စောကျဖုတျဖေါငျးဖေါငျးလေး ပျေါလာသညျ။ ရဈခကျြက မလှေငျ့ ခွထေောကျနှဈဖကျကို ဆှဲကားကာ ပေါငျကွားတှငျ ဒူးတုတျထိုငျလိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ ခါးမှာ ပတျထားသော တဘတျကို ဖွညျကာ ခွရေငျးသို့ လှမျးပဈလိုကျသညျ။ အရှညျ 7′ ခနျ့ ၊ လုံးပတျက ကပျြလုံးခနျ့ရှိသော တောငျမကျ နသေညျ့ လီးကွီး ပျေါလာသညျ။ ရုံးကနျနသေော ခွထေောကျနှဈဖကျကို ပုခုံးပျေါ ထမျးတငျလိုကျပွီး စောကျပတျအား လီးဒဈဖွငျ့ တလေို့ကျသည”မလုပနှဲ့၊ မလုပပှါနဲ့!!! အငှ့!!! ဇှိဇှိဇှိ!!! အားးးးးးး” လီးဒဈ စောကျပတျထဲ မွုတျဝငျသှားသညျ။ ရဈခကျြ မလှေငျ့ နို့ နှဈဖကျကို လကျဖွငျ့ ညှဈကိုငျကာ ခါးကို စောငျ့ထဲ့လိုကျပွနျသညျ။ “အငျ့!!! ဗြိဗြိဗဈြ!!!အားးးးးးးးးးးးးးးး” လီးမှာ တဈဝကျခနျ့ ဝငျသှားသညျ။ မလှေငျ့ စောကျပတျလေးလညျး စပါးလုံးတဈထောကျခနျ့ ကှဲသှားသညျ။ လီးဒဈအား အပြိုမှေးက တားစီး ထားသညျ။ လကျရော ခွထေောကျပါ ခြုပျထားသလို ဖွဈသဖွငျ့ မလှေငျ အျောဟဈနရေုံမှ လှဲ၍ ဘာမှ မတကျနိုငျပေ။
ရဈခကျြ အားယူကာ ခပျပွငျးပွငျး စောငျ့ထဲ့လိုကျသညျ။ “အငျ့!!!ဇှိဇှိဗြိဗဈြ ဒုတျ!!!! အားးးးးး သပေါပွီအမရေဲ့” လီးကို အဆုံးထိ ဆှဲထုပျကာ စောငျ့သှငျးလိုကျပွနျသညျ။ “အငျ့!!! ဗြိဗြိဗြှတျဗြှတျ ဒုတျ အီးဟီးဟီး နာတယျ!! နာတယျ” ရှညျလြှား ကွီးမားသော လီး ကွီးက စောကျပတျထဲ အတားအဆီးမရှိ ဝငျထှကျနသေညျ။ တဈခကျြ စောငျ့လိုကျတိုငျး သားအိမျကို အရှိနျဖွငျ့ ဝငျစောငျ့ သောကွောငျ့ နာကငျြခံခကျလှနျးကာ မကျြဝနျးမှ မီးပှငျ့မတကျ ခံစားရသညျ။ လီး တဈခြောငျးလုံးလညျး စောကျပတျမှ သှေးမြား နီရဲ နပွေီ။ ရဈခကျြ၏ စောငျ့ခကျြတှေ ပွငျးလှနျး၍ တဈကိုယျလုံး ယိမျးထိုးနသေညျ။ “အငျ့!!!! ဗြှတျဗြှတျဗှတျဗှတျ အားးးး ဗဈြဗဈြဗြိဗြိ အားးးးးးး ဇိဇိ ဗြှတျဗြှတျ အားးးး အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့ ဖတျဖတျဖတျဖတျ ဗြှတျဗြှတျဗှတျဗှတျ အားးးး ဟားးး ဟားးး ရှီးးးးးးး” ရဈ ခကျြ၏ လီးမှ သုပျရညျမြား မလှေငျ့ သားအိမျထဲ ပနျးလိုကျသညျ။
“Oh!!! good!!! Haaa” “ဗြှတျ ဗလှတျ ဗှတျ” လီးကွီး စောကျပတျမှ ကြှတျသှားစဉျ စောကျပတျထဲမှ ပဈြခြှဲခြှဲ သုပျရညျမြား သှေး နဲ့ အတူ ရော၍ အံထှကျလာသညျ။ ပုခုံးပျေါ ထမျးထားသော ခွထေောကျနှဈဖကျကို ခလြိုကျသညျ။ ကြျောနိုငျကလညျး ဒူးဖွငျ့ ဖိထား သော မလှေငျ့ လကျနှဈဖကျကို ဖယျပေးလိုကျသညျ။ “အဟငျ့ ဟငျ့ဟငျ့ အီးးဟီးးးဟီးးးးဟီးးးဟီးးးး” မလှေငျ မှယေ့ာပျေါတှငျ ခွေ ကားယား လကျကားယားဖွငျ့ ငိုနသေညျ။ ကြျောနိုငျက မလှေငျ့ ခွထေောကျနှဈဖကျကို ပုခုံးပျေါ ထမျးတငျလိုကျသညျ။ “မလုပျပါနဲ့ တော့၊ နာလှပါပွီ အီးဟီးဟီးဟီးးးးး” မလှေငျ၏ တောငျးပနျမှုကို လဈလြှဈရှုကာ ဂျေါလီထညျ့ထားသော လီးကွီးကို တံတှေးစှတျ လိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ မလှေငျ့ စအိုပေါကျကို လီးဒဈဖွငျ့ တကေ့ာ “အငျ့!!! ဇှိဇှိဗြိ!!! အားးး နာတယျ!! နာတယျ!! မရဘူးးး” ဖငျ ပေါကျထဲ ဒဈမွုပျသှားပွီ။ ထပျ စောငျ့သှငျးသညျ။ “ဗဈြဗဈြဗဈြဗဈြ!!!!! အားးးးးးးးးးးးးးးးးး”
ထိုအခြိနျမှစ၍ မလှေငျတဈယောကျ ကွေးစားလောကထဲ ရောကျခဲ့သညျ။ သို့သျော အပေါစား တော့ မဟုတျ။ Foreigner သီးသနျ့။ ကွေးကွီးသညျ။ ကယျြငါးပှငျ့ Hotel တဈခုနှငျ့ ခြိတျဆတျကာ လှုပျရှားသညျ။ ထို သရုပျကိုလညျး Speaking သငျတနျးဆရာမ အနနှေငျ့ ဖုံးကှယျထားသညျ။ မလှေငျ၏ ရညျရှယျခကျြက ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ ရငျး၍ ရသမြှ ပိုကျစံဆုကာ အရငျးအနှီး တဈခုရလာလြှငျ ဒီ ဘဝမှ ရုံးထှကျကာ အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွကျသနျးမညျဟု ဆုံးဖွတျထားသညျ။ ယခု သူမ ဘဝထဲ ညီမလေး အရငျးလို ခဈြရသော ပနျးနု ရောကျလာပွီ။ ပနျးနုအား ထိုကိစ်စ အသိပေး၍ အဖွဈ။ သူမအား အထငျသေးသှားမညျကို စိုးရိမျသညျလေ။
မမမလှေငျအိမျတှငျ ပနျးနု ရောကျနသေညျမှာ နှဈလရှိပွီ။ ရံဖနျ ရံခါ သောကွာနေ့ ညမြိုးတှငျ မမမလှေငျတဈယောကျ အလုပျကိစ်စ ဟုဆိုကာ ညပွနျမအိပျဖွဈ။ မနကျ ပွနျလာလြှငျလညျး တဈနကေုနျ အိပျသညျ။ တဈခါတလေ သငျတနျးပိတျရကျ စနနေတှေ့ဆေို လြှငျလညျး မနကျကတညျးက အလှပွငျ၍ ထှကျသှားကာ ညပိုငျးမှ ပွနျလာသညျ။ မမမလှေငျတှငျ ရညျးစားမရှိမှနျး ပနျးနု သိသညျ။ မမမလှေငျ ဘာလုပျနသေညျကို သိခငျြသျောလညျး မမေးရဲပေ။ မနညေ့ကလညျး ပွနျမလာဖွဈဘဲ မနကျ အစောကွီးမှ ပွနျလာပွီး အိပျနသေညျ။ ပနျးနုလညျး မမမလှေငျ အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈမညျစိုး၍ ထမငျးဟငျး ခကျြပွီး TV ရှထေို့ငျကာ မနညေ့က TV စဉျ အောကျတှငျ တှရေ့သော အပွာကားခှကေို ပွနျကွညျ့နမေိသညျ။ မမမလှေငျထံတှငျ ယခုလို ခှတှေေ တှတေ့ာ ပထမ အံ့သွမိ သျောလညျး ခုခတျေ လူငယျဘဲလဟေု တှေးမိကာ ကွညျ့ဖွဈသညျ။ ဖနျသားပွငျပျေါတှငျ နီဂရိုးသုံးယောကျနှငျ့ အဖွူမ တဈယောကျ3Some ဆတျဆံပုံကို အပီအပွငျ ရိုကျပွထားသညျ။ နီဂရိုးမြား၏ လီးတှကေ သံခြောငျးကွီးမြားသဖှယျ မာတောငျ ရှညျ လြှားကာ တုပျလှနျးလှသညျ။ အဖွူမလေးခမြာ တအားအားနှငျ့ ညညျးညူရငျး ဖငျ၊ စောကျပတျနှငျ့ ပါးစပျ သုံးပေါကျလုံး အလိုးခံ နသေညျ။ ပနျးနု ကွညျ့ရငျး အသညျးတှယေားကာ စောကျပတျထဲမှ အရညျမြား စိမျ့ထှကျလာသညျ။
“တူတူတူတူ” “Hello!!! မလှေငျရေ၊ ဒီကနေ့ date ထားတဲ့ foreigner တှရှေိတယျ၊ ကွေးကတော့ ——- အခနျးနံပါတျက ——- နလေ့ညျ 10:00 am မှာတှမေ့ယျတဲ့” ပနျးနု ဘာမှ ပွနျမဖွနေိုငျခငျ တဈဖကျမှ ပွောဆိုကာ ဖုနျးခသြှားသညျ။ ပနျးနု မမမေ လှငျ၏ hand phone ကို ရငျခှငျမှာအပျကာ မကျြရညျမြား ကလြာသညျ။ “မမရယျ” နာရီကို ကွညျ့လိုကျတော့ နံကျ 8:30 am သာရှိသေးသညျ။ အခနျးတံခါးကို အသာလေး ဖှငျ့လိုကျသညျ။ မမမလှေငျ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောနသေညျ။ ပနျးနု ဆုံးဖွကျခကျြ တဈခုကို ခလြိုကျကာ မမမလှေငျ၏ နှဖူးကို နမျးရှိုကျလိုကျသညျ။ ကွယျငါးပှငျ့ Hotel ကွီးသို့ ပနျးနု ရောကျရှိခဲ့သညျ။ ခြိနျးဆိုထား သော room no. သို့ တနျးသှားခဲ့သညျ။ ပနျးနု ရငျခုံစှာဖွငျ့ လူချေါ bell ကို နှိပျလိုကျသညျ။ “တငျးတောငျ!!! တငျးတောငျ” “ကြှီ!!!! Hello” အရပျရှညျရှညျနှငျ့ foreigner တဈယောကျ ထှကျလာသညျ။
“Hi” “Please come on” “yes” အခနျးထဲ ဝငျလိုကျသညျ။ စုစုပေါငျး foreigner သုံးယောကျ။ သူမ ခွဖြေား လကျဖြားမြား အေးစကျနသေညျ။ “Are you Mrs. May Lwin?” “No. I’m Pann Nu. Mrs. May Lwin is ill, so I come here replace for her.” “Ok. ok. never mind. You are young and beautiful. We like you.” “Thank, sir” Foreigner တဈယောကျ ငှဲ့ ပေးသော အရကျခှကျကို မော့လိုကျသညျ။ “ဟားးးး” လညျခြောငျးထဲ ပူဆငျးကာ အနညျးငယျ နှေးထှေးသှားသညျ။ Air com က လညျး အားကောငျးလှသညျ။ စကားမြား ပွောဆိုကွရငျး နောကျတဈခှကျ ထပျသောကျသညျ။ စိတျလညျး အနညျးငယျ ရဲတငျးလာ သညျ။ “Ok, just start now” Foreigner နှဈယောကျက ပနျးနု၏ ဘေး တဈဖကျတဈခကျြစီတှငျ ဝငျထိုငျသညျ။ တဈယောကျက ပနျးနု၏ မကျြနှာအား ဆှဲလှညျ့ကာ နှုတျခမျးကို စုပျနမျးလိုကျသညျ။
“ပွှတျပွှတျပွှတျ အငျးဟငျးဟငျးဟငျး” နောကျတဈယောကျက သူမ၏ နို့အုံကို ကိုငျတှယျပှတျသပျနသေညျ။ သူမ၏ အကငြ်္ီ ကွယျသီးမြား တဈလုံးခွငျး ဖွုတျနသေညျ။ “ပွှတျပွှတျပွှတျ အငျးဟငျးဟငျး” ပါးစပျကို နမျးရငျး လြှာကို စုပျခံရသဖွငျ့ ပနျးနု မကျြလုံးမြား မှေးစငျးသှားသညျ။ ပနျးနု၏ ခန်ဓာကိုယျ အပျေါပိုငျးလညျး ဗလာကငျြးသှားသညျ။ နို့တဈဖကျကို ဖှဖှလေး စုပျနယျပွီး ကနျြနို့အုံကို ပါးစပျဖွငျ့ စုပျခွငျး ခံနရေသညျ။ Foreigner တဈယောကျက ပနျးနု ပေါငျကွား ဒူးထောကျကာ စကပျနှငျ့ အောကျခံ ဘောငျးဘီကို ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ ပနျးနု၏ စောကျပတျလေးကို လကျဖွငျ့ ဖွဲလိုကျသညျ။ နီရဲနသေော စောကျပတျ နှုတျခမျးသား ကို လြှာဖွငျ့ ထိုးမှကော လြှကျလိုကျရာ “ဟားးးးး ကှတှ ရှီးးးးးးး” နို့ရော စောကျပတျပါ အစုပျခံရသဖွငျ့ တခါမြှ မခံစားဘူးသော အရသာကို ခံစားနရေသညျ။ ပါးစပျကို နနျးနသေူက ပနျးနု၏ လညျတိုငျကို စုပျရငျး လြှာဖွငျ့ ကလိနသေညျ။
“ပွှတျ ရှလှတျ!!! ရှ လူးးးးး အားးးး ရှီးးးး” စောကျပတျအား ပါးစပျဖွငျ့ စုပျခံရ၍ အတှငျးသားနုနုမြား အမွုံလိုကျ ပွုတျပါသှားသလို ခံစားရပွီး ရငျထဲ တလှပျလှပျ ဖွဈနသေညျ။ စောကျပတျကို လြှကျရငျး လကျညှိုး တဈခြောငျးက စအိုပေါကျကို ထိုးမှနေရော ပနျးနု ခါးလေး ကော့ ကော့သှားသညျ။ အမြိုးသား သုံးဦး၏ အထိအတှေ့ အကိုငျအတှယျကို ရရှေညျ တောငျ့မခံနိုငျတော့ဘဲ “ပွှတျပွှတျပွှတျ အအအ ရှ လှတျ ပွှတျ ပလပျလပျ ပဈြ အားးးး ရှီးးးး ဟားးးး အဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့” ပနျးနု စောကျပတျထဲမှ အရညျမြား ပနျးထှကျကာ တဈခြီ ပွီး သှားသညျ။ Foreigner သုံးယောကျလညျး အဝတျမြား ခြှတျလိုကျရာ ပနျးနု မကျြလုံးပွူးသှားသညျ။ လီးကွီးတှကေ အရှညျ 7′ ခနျ့၊ လုံးပတျက သူမ လကျဖြံခနျ့ တုပျသညျ။ ဒါကွီးတှကေို ခံနိုငျပါ့မလား။
ပနျးနု တှေးနခြေိနျတှငျ Foreigner သုံးယောကျက သူမနား မတျတပျရပျလိုကျသဖွငျ့ သုံးယောကျ အလယျတှငျ ဒူးထောကျ ထိုငျလိုကျသညျ။ မနကျက ကွညျ့ထားသညျ့ အပွာကားထဲမှ ပွကှကျ အတိုငျး သူတို့၏ လီးကို စုပျပေးရတော့မညျလေ။ မကျြနှာရှေ့ တညျ့တညျ့ရှိ လီးကို လကျဖွငျ့ကိုငျကာ အရညျပွားကို ဆှဲလိုကျရာ နီရဲ ပွဲအာနသေော ဒဈကွီး ပျေါလာသညျ။ ဒဈကို နှုတျခမျးဖွငျ့ ငုံကာ လြှာဖွငျ့ ဝိုကျလိုကျသညျ။
“ပွှတျပွှတျပွှတျ Ohh yes ရှီးးးးးး” ကနျြ လီးနှဈခြောငျးကို လကျဖွငျ့ ကိုငျကာ ကှငျးတိုကျပေးသလို ရှတေို့းနောကျစုပျ လုပျ ပေးသညျ။ “ပွှတျပွှတျပွှတျ အားးဟားးးး” ဒဈကို စုပျလိုကျ၊ လိငျတနျကို လြှာဖွငျ့ လြှကျလိုကျဖွငျ့ လီးသုံးခြောငျးကို အလှညျ့ကြ စုပျပေးနသေညျ။ 15 mins ခနျ့ကွာသျော လီးစုပျတာ ရပျလိုကျပွီး သူမအား မှယေ့ာပျေါ ပှတေ့ငျလိုကျသညျ။ ပနျးနု ပေါငျကားပွီး လှဲ လိုကျသညျ။ တဈယောကျက ပနျးနု ပေါငျကွားတှငျ ဒူးထောကျထိုငျကာ မွှဟေောကျကွီး မာနျဖီနသေကဲ့သို့ ဖွဈနသေော လီးဒဈကွီး ဖွငျ့ ပနျးနု စောကျစိကို ပှတျတိုကျလိုကျရာ “အ” ပနျးနု ကိုယျလေး တှနျ့သှားသညျ။ လီးဒဈကွီး စောကျပတျထဲ ဝငျလာပွီ။ ပနျးနု လကျသီးကို ကဈြကဈြပါအောငျ စုပျကာ မကျြစိမှိတျ အံကွိတျထား၏။
“အငျ့!!! ဗြှတျဗြှတျဗြိဗြိ!!!! အူးးးဟူးးဟူး” အရညျရှဲနသေော စောကျပတျထဲ လီးကွီးက အတားအဆီးမဲ့စှာ အဆုံးထိ ဝငျသှား သညျ။ လီးကွီးမှာ ရှညျလြှားလှနျးသဖွငျ့ သားအိမျအောငျ့သှားသညျ။ “အငျ့!!! ဗြိဗြိဇှိဇှိ!!! အားးးးးးး ဗြှတျဗြှတျ ဗှတျဗှတျ!! အားးးး ဖတျဖတျဖတျဖတျ အအအအ ဇှိဇှိဗြှတျဗြှတျ အအအအ” လီးအထုပျအသှငျးတိုငျး စောကျပတျ နှုတျခမျးသားမြား အမွုံလိုကျ ကပျပါသှားလိုကျ ရှုံ့ဝငျသှားလိုကျ ဖွဈနသေညျ။ Foreigner လညျး လိုးရတာ စီးစီးပိုငျပိုငျနှငျ့ အရသာ ရှိလှသညျ။ စောငျ့ခကျြတှေ ပွငျးထနျလှနျးသဖွငျ့ ပနျးနု ကိုယျလုံးလေး ယိမျးထိုးနသေညျ။ “ဗြှတျဗြှတျ ဗှတျဗှတျ အအအအ ဇှိဇှိဗဈြဗဈြ အအအအ ဗြိဗြိဇှိဇှိ အအအအ အားးးး ဟားးးး ရှီးးးး on yes ဟားးးးး” ပနျးနု ဗိုကျပျေါ သုပျရညျမြား ပနျးထုပျလိုကျသညျ။ တဈယောကျ ပွီးသှားသညျနှငျ့ နောကျ လီးတဈခြောငျးက စောကျပတျထဲ တနျးဝငျလာသညျ။
“အငျ့!!! ဗြှတျဗြှတျ ဗှတျဗှတျ အားးးးးးး” သုံးယောကျလုံး လိုးပွီးသှားသျော ပနျးနုလညျး မှယေ့ာပျေါ ခှခှေလေေး ဖွဈနသေညျ။ သားအိမျ အောငျ့လှနျးသဖွငျ့ လကျနှငျ့ ဖိကာ ကှေးကှေးလေး နနေရေသညျ။ 15 mins ခနျ့ နားပွီးသျော တဈယောကျက မှယေ့ာပျေါ တကျလာကာ ပနျးနုကို လေးဘကျ ကုနျးခိုငျးသညျ။ ကုနျးထားသော ပနျးနု ဖငျနောကျတှငျ ဒူးထောကျကာ စအိုပေါကျကို လြှာဖွငျ့ ထိုးမှလေိုကျသညျ။ “အ အ” ပနျးနု ဖငျလိုးခံရတော့မညျကို သိသဖွငျ့ ထိတျလနျ့နမေိသညျ။ ဖငျပေါကျကို စိတျကွိုကျ လြှကျပွီး လီးဒဈဖွငျ့ တလေို့ကျသညျ။ ပနျးနု အံကို တငျးတငျးကွိတျထားသညျ။ “ဇှိဇှိဗှိ!!! အီးးးးးးး” လီးဒဈကွီးက ဖငျပေါကျထဲ မဆနျ့မပွဲ ဝငျလာသညျ။ အံကွိတျထားရလှနျး၍ မကျြနှာကွီး နီမွနျးကာ လညျပငျး အကွောမြားပငျ ထောငျလာသညျ။
“အငျ့!!! ဗြှတျဗြှတျဗု!!! အားး လားး လားး နာတယျ နာတယျ အီးးး” လီးတဈဝကျခနျ့ ဝငျသှားသညျ။ နာကငျြလှနျး၍ ပနျးနု ခေါငျး မြား ခါယမျးနသေညျ။ “အငျ့!!!! ဗြှတျဗြှတျဗှတျ အူးးး ဟူးးး ဟူးးး သပေါပွီ အမရေဲ့ ဖငျကှဲပါပွီတော့ အီးဟီးဟီးဟီးးးးးးး” လီး အဆုံးထိ ဝငျသှားပွီ။ Foreigner က ပနျးနု ခါးကို စုံကိုငျကာ မီးကုနျ ယမျးကုနျ လိုးတော့သညျ။ “အငျ့!!! ဗြိဗြိဇှိဇှိ!!! အားးးးးးး ဗြှတျ ဗြှတျ ဗှတျဗှတျ!! အားးးး ဖတျဖတျဖတျဖတျ အားးးလားး လားးး ဇှိဇှိဗြှတျဗြှတျ အအအအ အားးးးးးး” ပနျးနု ငယျသံပါအောငျ အျော နရေသညျ။ အခကျြ 20 ခနျ့ အားရပါးရ စောငျ့ပွီးသျော လီးကို ဖကျပေါကျထဲမှ ထုတျလိုကျသညျ။ “ဗြှတျ ဗလှတျ ဘူ!!! အီးးဟီးး ဟီးးး” ဖငျလိုးနတေဲ့ foreigner က မှယေ့ာပျေါ ပတျလတျလှနျအိပျကာ ပနျးနုကို အပျေါမှ တကျစောငျ့ခိုငျးသညျ။ “ဖတျဖတျဖတျ ဖတျ အအအအ ဗြှတျဗြှတျ ဗှတျဗှတျ အအအအ ဇှိဇှိဗြိဗြိ အအအအ” နောကျတဈယောကျက ပနျးနု စအိုကို လီးဖွငျ့တကေ့ာ စောငျ့ သှငျးသညျ။
“အငျ့!!! ဗြိဗြိဇှိဇှိ!!! အားးးးးးး ဗြှတျဗြှတျ ဗှတျဗှတျ!! အူးးးး ဖတျဖတျဖတျဖတျ အားးးလားး လားးး ဇှိဇှိဗြှတျဗြှတျ အအအအ အားးးးးးး” စောကျပတျထဲရော ဖငျထဲပါ လီးနှဈခြောငျး ပငျစတငျ ခုတျသလို စီးခကျြညီညီ ဝငျထှကျနသေညျ။ ပနျးနုလညျး နာကငျြ မှုနှငျ့အတူ သူမတူသော ခံစားမှကို ရရှိသဖွငျ့ အျောဟဈ ညညျးညူနရေသညျ။ ကနျြတဈယောကျ၏ လီးက မကျြနှာအနီး ရောကျလာ သဖွငျ့ ပါးစပျ ဟပေးလိုကျရာ “အငျ့!!! ဗြိဗြိဇှိဇှိ!!! အုအု အှတျအှတျ ဗြှတျဗြှတျ ဗှတျဗှတျ!! အူးးးး ဖတျဖတျဖတျဖတျ အုအု အားးးးးး ဇှိဇှိဗြှတျဗြှတျ အအအအ အားးးးးးး” Foreigner သုံးယောကျ၏ မညှာမတာ လိုးသညျ့ဒဏျကို တဈနကေုနျအောငျ လှိမျ့ခံ ခဲ့ရသဖွငျ့ စောကျဖုတျရော ဖငျပေါကျပါ ပူထူနပွေီ။ ခံတှငျးထဲလညျး သုပျညှီနံ့တှေ လှိုငျနသေညျ။ အကွိမျကွိမျ ပွီးခဲ့ရသဖွငျ့ ဒူးမြား ခြောငျကာ နားထဲမှ လမြေား ထှကျနသေညျ။ ညနေ 4:00 pm မှ လိုးပှဲရပျသှားသညျ။
ပနျးနုနှငျ့ မလှေငျလညျး မထူးဇာတျခငျးကာ Foreigner သီးသနျ့ order လိုကျရငျး ရသမြှ ငှစေုသညျ။ တဈနှဈခနျ့ ကွာသျော ရရှိလာ သော အရငျးအနှီးဖွငျ့ ပွငျဦးလှငျတှငျ ခွံဝနျးလေးဝယျကာ အထညျဆိုငျလေးနှငျ့ speaking သငျတနျး တှဲဖှငျ့ပွီး ဇာတျမွှုတျနကွေ သညျ။ မမမလှေငျက နှဈပတျ တဈကွိမျ မန်တလေးသို့ ဆငျးကာ ဆိုငျအတှကျ ပစ်စညျးမြား ဝယျသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ အခေါကျက ကမ်ြမာ ရေး လိုအပျခကျြအရ သှေးစဈမညျဟု ဆိုသဖွငျ့ သှေးဖေါကျပေးလိုကျရသညျ။ ဒီကနလေ့ညျး မမမလှေငျ ပွနျအလာကို မြှျောရငျး ခွံ ထဲတှငျ သဈပငျ ရလေောငျးနသေညျ။ “တီတီတီ” “လာပွီ မမရေ” “ဧညျ့သညျပါတယျ ပနျးနုရေ” “ကြှီ” “ဟငျ” ပနျးနု ကွကျ သေ သသှေားသညျ။ မမမလှေငျဘေးမှ ဆငျးလာသူက မောငျမောငျ။ သူမ အသကျတမြှ ခဈြရသော မောငျမောငျ။ ပနျးနု သတိ ဝငျ လာကာ အိမျထဲ ပွေးဝငျသညျ။ မောငျမောငျ အနောကျက ပွေးလိုကျကာ ပနျးနု လကျမောငျးကို ဆှဲပွီး ရငျခှငျထဲ ဖကျထားလိုကျ သညျ။
“ဘာလို့ ပွေးတာလညျး ပနျးနုရယျ” “လှတျ!! ပနျးနုကို လှတျ အီးဟီးဟီး ပနျးနု ခန်ဓာကိုယျက မသနျ့စငျတော့ဘူး အီးဟီးဟီးဟီး” “ကိုယျခဈြတာ ပနျးနုရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို မဟုတျဘူးလေ။ ပနျးနုကို ခဈြတာလေ။ ကိုယျ့ကို ခှဲမသှားပါနဲ့တော့ကှာ” “အဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့” “ကိုယျလညျး ပနျးနု ပြောကျသှားထဲက စိတျလပွေီး လုပျခွငျရာလုပျ၊ မိနျးမ တကာနဲ့ အိပျခဲ့တာဘဲ၊ ပနျးနုကို ကိုယျ ခှငျ့လှတျ နားလညျတယျ၊ ခဈြလညျး ခဈြတယျ” “ဟုတျတယျ ညီမလေး၊ ညီမလေး အိမျက ထှကျလာကတညျးက မောငျမောငျ လိုကျရှာနေ တာ အရူးတပိုငျးဘဲ၊ မမတို့ ပွငျဦးလှငျ ရောကျကတညျးက ညီမလေး မကျြနှာ ညှိုးနတော မကွညျ့ရကျလို့ မန်တလေး ရောကျတိုငျး မောငျမောငျ့ အကွောငျး စုံစမျးခဲ့တယျ၊ ပွီးခဲ့တဲ့လက လမျးမှာ တှရေ့ငျး ပနျးနုကို တှခွေ့ငျကွောငျး၊ သူ လိုကျရှာနကွေောငျး ပွော တယျ၊ မမက ပနျးနုရော မောငျမောငျပါ သှေးစဈလို့ Ok မှ ပေးတှမေ့ယျလို့ ပွောထားတာ”
“ဒါ ဒါဆို” “ဟုတျတယျ ညီမလေး၊ မမတို့ သှေးစဈတာ result က ok တယျ” “ဟုတျတယျ ပနျးနုရဲ့၊ ဦးမွအောငျတို့လညျး ဖရိုဖရဲ တှေ ဖွဈကုနျတယျ၊ ကြျောနိုငျ ဖဲဝိုငျးတဈခုမှာ ဓါးထိုးခံရလို့ သသှေားတယျ။ ဦးမွအောငျလညျး ပစ်စညျးတှေ အဖမျးခံရလို့ ဘဝတှေ ပကျြကုနျရော၊ နောကျဆုံး စုစုကို အကွှေးရှငျ နိုငျငံခွားသားတှကေ ဝိုငျးပွီး မုဒိနျးကငျြ့လိုကျတာ သှေးလှနျပွီး သသှေားတယျ၊ ဦးမွ အောငျလညျး သမီးစိတျနဲ့ စိတျကရြောဂါဖွဈပွီး သရေော” “အို စုစု ညီမလေးရယျ အဟငျ့ဟငျ့” “စုစုလေးအတှကျ စိတျမကောငျး ပမေယျ့ ဦးမွအောငျတို့ ဝဋျလညျတာဘဲလေ” “ကဲ မငိုပါနဲ့တော ပနျးနုရယျ၊ ကိုယျ့ ရငျခှငျထဲမှာ မငျးမကျြရညျ ထပျမကစြရေတော့ပါ ဘူးကှယျ” “ွပွတျွပွတျွပွတျ” “အိုးးး မမရှိတယျလေ” “ရှိ ရှိကှာ၊ ဒီက လှမျးနရေတာ ကွာပေါ့ ပွှတျပွှတျပွှတျ” မောငျမောငျ ပနျးနု၏ ပါးနှဈဖကျကို အနမျးမိုးတှေ ခြှနေသေညျ။
“မောငျမောငျနျော ပွောလေ ကဲလေ အဟှနျး” ခဈြသူနှဈဦး ကွညျနူးနသေညျကို ပွုံး ကွညျ့ရငျး မလှေငျ ခွံထဲ ရှောငျထှကျခဲ့သညျ။ အခုတော့ မုနျတိုငျး ပွီးလို့ ပနျးတှေ ပှငျ့နပွေီလေ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံး ပန်းနုမှာ အခန်းထဲတွင် ပိတ်ခံထားရပြီး ဦးမြအောင်နှင့် ကျော်နိုင်၏ မညှာမတာ မုဒိန်းကျင့်ခြင်းကို ခံရ သည်။ တနင်္လာနေ့ နံက် စောစောတွင် ဦးမြအောင်ထံ ဝင်လာသော phone ကြောင့် ဦးမြအောင်တို့နှစ်ယောက်သား ပျာယာ ခပ် နေသည်။ ဒေါ်ညိုတို့ စီးသွားသော ကားသည် လမ်းတွင် တိမ်းမှောက်ကာ ခရီးသည်အားလုံး ပွဲခြင်းပြီး သေဆုံးသွားသည်။ စုစုကို ခေါ်ကာ ဦးမြအောင်တို့ ချက်ခြင်း လိုက်သွားသည်။ မိခင်အတွက် ပူဆွေး သောကရောက်သော်လည်း လက်ရှိ အခြေအနေမှ လွတ်မြောက်ရန် ပန်းနု ကြိုးစားရပြီ။ တံခါးအား အပြင်မှ သော့ခက်ထားသဖြင့် ပြူတင်းပေါက် မှန်ကို ခုံနှင့် ရိုက်ခွဲလိုက်သည်။ အိပ် ယာခင်းနှင့် ဆောင်များကို ကြိုး အဖြစ် အသုံးပြုကာ အပေါ်ထပ်မှ တွဲလောင်းခို ဆင်းခဲ့သည်။ ဖိနပ်ပင် မဝတ်နိုင်ဘဲ ခြေဦးတဲ့ရာ ပြေးထွက်ခဲ့သည်။ ပန်းနု ဘယ်ကို သွားရမည် မသိ။ မသန့်စင်တော့သည့် မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ချစ်ရသော မောင်မောင့်ထံ အပ်နှံဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ မျက်ရည် စက်လက်ဖြင့် ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးနေစဉ်
“ပန်းနု၊ ညီမလေး” “ဟင် မမ၊ မမမေလွင်” “အို ပန်းနု ပန်းနု” သူမအား ညီမလေး တစ်ယောက်လို ချစ်သော Speaking သင်တန်းဆရာမ မေလွင်၏ ခေါ်သံသဲ့သဲ့သာ ကြားလိုက်ရသည်။ ရင်ခွင်ထဲ ပြေးဝင်လာရင်း သတိလစ်သွားသော ညီမအရင်းလို ချစ်ရသော ပန်းနု၏ ခန္ဓာကိုယ်လေးအား ပွေ့ထားရင်း မေလွင် တကျော်ကျော် အော်ခေါ်နေမိသည်။ မေလွင်ငှားထားသော လုံးခြင်း တိုက်၏ အိပ်ခန်းထဲတွင် မေလွင့်အား ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ငိုရင်း ပန်းနု ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ရင်ဖွင့်နေသည်။ “တောက်!!!! ယုတ်မာလိုက်ကြတာ၊ တိတ်တော့ ညီမလေး၊ မမတို့ လောကကြီးမှာ ရှေ့ရှောက် ရင်ဆိုင်ရမှာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်၊ ဘာ မှ အားမငယ်နဲ့၊ မမနဲ့ဘဲနေတော့၊ ညီမလေးကို မမ တစ်သက်လုံး ကာကွယ်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား” ရင်ခွင်ထဲ ငိုရှိုက်နေသော ပန်းနု ခေါင်းကို ပွတ်သပ်ရင်း နှစ်သိမ့်နေသည်။
ကျော်နိုင်–ကျော်နိုင်၊ ငါ့ ဘဝကို ဖျက်စီးရုံ မကဘူး၊ အခု ငါ့ ညီမလို ချစ်ရတဲ့ ပန်းနု ဘဝလေးကိုပါ နင်းချေလိုက်ကြပြီ၊ ဒင်းတို့ တစ်နေ့ ဝဠ်လည်ဦးမှာပါ – မေလွင် ပန်းနုအား နှစ်သိမ့်ရင်း လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည် သတိရမိသည်။ မေလွင် အသက် 23 နှစ်တွင် E Major နှင့် ကျောင်းပြီးကာ Speaking သင်တန်းပါ ပြီးသွားသဖြင့် ပြင်ဦးလွင်မှ မန္တလေးသို့ အလုပ်ရှာရန် ဆင်းလာသည်။ ထိုသို့ အလုပ်ရှာနေစဉ် state ကျောင်းတုံးက တစ်ကျောင်းထဲသားခြင်း ဖြစ်သူ ကျော်နိုင်နှင့် စုံသည်။ ထိုစဉ်က ကျော်နိုင် ဘာတွေ လုပ်နေသည်ကို မေလွင်မသိခဲ့ပေ။ ကျော်နိုင်ကလည်း မှောင်ခို ကိစ္စအတွက် နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးနှင့် အလုပ် လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို နိုင်ငံခြားသားက packing ဖွင့်ခြင်သည်ဟု တောင်းဆိုလာသဖြင့် ဖါခေါင်းများနှင့် ချိတ် ဆတ်ရာ အစဉ်မပြေနေချိန်တွင် ကျောင်းနေဖက် ဖြစ်သော မေလွင်ဆိုသည့် မအူမလယ် မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်က အလုပ်ရှာပေးရန် ပြောဆိုလာသဖြင့် ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် ဖြစ်သွားသည်။
“နင်က speaking ရတယ်ဆိုတော့ အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ဟ” “ဘယ်လို အလုပ်မျိုးလည်း ကျော်နိုင်” “Company တစ်ခုက နိုင်ငံခြားသားက secretary တစ်ယောက် ရှာခိုင်းထားတယ်ဟ၊ နင် လုပ်လို့ အစဉ်ပြေမလား”“လစာက” ကျော်နိုင် လက်သုံး ချောင်း ထောင်ပြလိုက်သည်။ “အဲ့ဒီ အထက်မှာဘဲ၊ စာချုပ်တော့ ချုပ်ရလိမ့်မယ်” “Bond က ဘယ်နှစ်လလည်း” “သုံးလ ချုပ်ရ မယ်” “လုပ်မယ်ဟာ” “Ok လေ၊ နင် အလုပ်ရရင် ငါ့ကို တစ်ဝိုင်းနော်” “အေးပါဟယ်၊ အလုပ်သာ ရပါစေဦး” “အေး ဒါဆို ငါ မနက်ဖန် ပြောပေးမယ်၊ နင့် ဖုန်းနံပါတ် ပေးထားလိုက်” “09————-“ Foreigner နှင့် interview ပြီးနောက် လစာ5သိန်းရ မည် ဆိုသဖြင့် မေလွင် အပျော်ကြီး ပျော်နေသည်။ Bond စာချုပ် သက်တန်းကို သုံးလ သတ်မှတ်လိုက်သည်။ အပျော်လွန်နေ သဖြင့် စာချုပ်ကို အပေါ်ဆုံး တစ်စုံသာ ဖက်ပြီး အောက်က နှစ်စုံအား သေခြာမဖက်ဘဲ မေလွင် လက်မှတ် ထိုးလိုက်သည်။ Foreigner ကတော့ အချိုးအစား ပြေပြစ်လွန်းသော မေလွင့် အား ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံးကြည့်ကာ တံတွေးမျိုချနေသည်။
အလုပ်စဆင်းရန် ရေချိုး အလှပြင်ပြီး ကျော်နိုင် လာအခေါ်ကို စောင့်နေသည်။ အပေါ်ပိုင်း Shirt အင်္ကျီ အဖြူနှင့် ဒူးထိ ဖုံးသော စ ကပ် ဘေးကွဲ အနက်ကလေး ဝတ်ထားသည်။8:00 am တွင် ကျော်နိုင် ကားတစ်စီးဖြင့် လာခေါ်သည်။ မနေ့က Interview သည့် တိုက်သို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ “please, sit down” (နိုင်ငံခြားသားနှင့် ပြောသည့် စကားများအား သာဂိ မရေးတက်သဖြင့် မြန်မာလို ရေးသားလိုက်သည်။ ငိငိ) ဧည့်ခန်းထဲရှိ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ထိုင်လိုက်စဉ် ကျော်နိုင်နှင့် နိုင်ငံခြားသား တီးတိုးပြောဆိုကာ အပေါ်ထပ်သို့ တက်သွားသည်။ 10 mins ခန့်ကြာသော် ကျော်နိုင် ပြန်ရောက်လာကာ “ကဲ မေလွင်ရေ၊ ရုံးခန်းက အပေါ်ထပ်မှာ၊ လိုက်ခဲ့လိုက်” မေလွင်လည်း ကျော်နိုင် နောက်သို့ လိုက်ခဲ့သည်။
အခန်းကျယ်ကြီး တစ်ခုထဲ ဝင်သွားသည်။ အခန်း ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ရုံး ခန်းနှင့် မတူဘဲ မိသားစု အိပ်ခန်းကျယ် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပြီး မွှေ့ယာအကြီးတစ်ခု ဖြန့်ခင်းထားသည်။ စက်တီခုံ တစ်စုံသာ ရှိပြီး အလုပ်စားပွဲ မတွေ့ရသဖြင့် “ကိုကျော်နိုင် အလုပ်ခန်းက ဘယ်လိုကြီးလဲ” “ဂျောက်” “ဟင်!!!! ရှင် ရှင် ဒါဘာလုပ်တာလည်း” ကျော်နိုင် အခန်းတံခါးကို lock ချလိုက်သဖြင့် မေလွင် ထိတ်လန့်သွားမိသည်။ နိုင်ငံခြားသား ကလည်း တဘတ်ရှည်ကြီး ခါးမှာ ပတ်ကာ အပေါ်ပိုင်း ဗလာနှင့် ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လာသည်။ “ဒါက မင်းအတွက် အလုပ်ခန်းလေ မေလွင်ရဲ့ ဟဲဟဲဟဲ” “ဒါ ဒါက ဘာသဘောလဲ ကိုကျော်နိုင်” “ဘာသဘောမှ မဟုတ်ပါဘူး မေလွင်ရယ်၊ စာချုပ်ထဲက အတိုင်း မင်း ဆောင်ရွက်ပေးလိုက် ရင် အစဉ်ပြေပါတယ်” ကျော်နိုင် ပစ်ပေးသော စာချုပ်အား ကြည့်ပြီး မေလွင် မျက်လုံး ပြူးသွားသည်။ သူမ ကိုင်ထားသည့် စာချုပ်က အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း စာချုပ် မဟုတ်ဘဲ လက်ထပ် စာချုပ်ကြီး။ သတို့သမီးနှင့် သတို့သား နေရာတွင် မေလွင်နှင့် Foreigner လက်မှတ်ကြီး။ အသိသက်သေနှစ်ဦးလည်း ပါသည်။
သွားပြီ။ မေလွင် မျက်လုံးတွေ ပြာသွားသည်။ “ဒါ!!! ဒါ ဟို စာချုပ် မဟုတ်ဘူး” “လက်မှတ်ကတော့ မင်းလက်မှတ် အစစ်ပါကွ” “နင် နင် သက်သက်မဲ့ ယုတ်မာတာ ဖယ်စမ်း” သူမဘဝ ဘာဖြစ်တော့မည်ကို သိသဖြင့် ကျော်နိုင့်အား တွန်းကာ တံခါးပေါက်စီ ပြေးသည်။ ကျော်နိုင် မေလွင့် လက်မောင်းကို လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။ “ဘယ်ပြေးမလို့လည်း မေလွင်ရယ်၊ ဟိုမှာ ရစ်ချက်က သတို့သမီး အသစ်စက်စက်လေးနဲ့ ပျော်ပါးဖို့ အစဉ်သင့် ဖြစ်နေပြီ” “ဖြန်းးးး အ” ကျော်နိုင့် ပါးအား လက်ဝါးဖြင့် ရိုက်လိုက်သည်။ “အော နင်က ငါ့ကို ရိုက်တယ်ပေါ့ ကဲကွာ ကဲကွာ ဖြန်းဖြန်းဖြန်း အားးးး” မေလွင် မွှေ့ယာပေါ် လဲကျသွားသည်။ “ရစ်ချက်ရေ ဆုတ်ပျက်သွားအောင် တွယ်စမ်းကွာ အဲ့ကောင်မကို” ရစ်ချက်လည်း မွှေ့ယာပေါ် ခွေခွေလေး ဖြစ်နေသော မေလွင့် ခြေထောက် အား ဆွဲလိုက်သည်။
“ခွေးကြီး လူယုတ်မာကြီး လွှတ် ငါ့ကို လွှတ်စမ်း အီးးဟီးးဟီးးး” ရစ်ချက် ရင်ဘက်အား ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ကာ ရုံးသည်။ မေ လွင် လူးလည်းထကာ ရင်ချက် ရင်ဘက်အား လက်သည်းဖြင့် ကုပ်ဖဲ့သည်။ “ဖြန်းဖြန်းဖြန်း အားးးး” ရစ်ချက်၏ လက်ဝါးက မေ လွင့် ပါးပေါ် ဘယ်ပြန် ညာပြန် ကျလာသည်။ ကျော်နိုင်က မေလွင့် လက်နှစ်ဖက်အား ထိန်းချုပ်ကာ ဒူးဖြင့် ဖိထားသည်။ ပြီးနောက် မေလွင့် ဆံပင်အား စုပ်ကိုင်ကာ “ငါတို့ လုပ်တာ အသာတကြည် ငြိမ် မခံရင် အသားနာလိမ့်မယ် မေလွင်၊ ပြီးတော့ လက်ထပ် စာချုပ်ကြီး ရှိနေတော့ နင် မုဒိန်းမှုနဲ့ တရားဆွဲလည်း အလကားဘဲ ဟားဟားဟားဟားးး” “လူယုတ်မာတွေ၊ လွှတ် ငါ့ကိုလွှတ် အီးး ဟီးးဟီးးးဟီးးးး” “ဗျိဗျိဗျိဗျီးးးးးး အ မလုပ်ပါနဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ အမေရယ် ကယ်ပါဦးးး အီးးဟီးဟီးဟီး” ရစ်ချက် ဆုတ်ဖြဲလိုက်သဖြင့် စကပ်အတိုလေး စုတ်ပြဲသွားသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ အနီရောက်လေး အောက်တွင် မို့ကြွနေသော စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်း လေးက သွားရည် ယိုစရာပင်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ကျော်နိုင့်ဒူးဖြင့် ဖိထား၍ မေလွင် ရုံးလို့ မရပေ။ သူမဘဝ ရေတိမ်နစ်တော့မည်။
“ဗျိဗျိဗျိဗျီးးးး အားးးး မလုပ်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ အီးဟီးဟီးဟီးးး” ရှဈ အင်္ကျီ အဖြူလေး ကျယ်သီးများ ပြုတ်ထွက်ကာ အင်္ကျီလည်း ပြဲ သွားသည်။ ဘယာစီယာ အဖြူလေးအား အလည်မှ ကိုင်ကာ ဆွဲစောင့်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ “အားးး အမေရေ ကယ်ပါဦးးး လူယုတ်မာတွေ လွှတ်လွှတ် အီးဟီးဟီးဟီး အ အ နာတယ် နာတယ်” ဖြူဝင်းမို့မောက်သော နို့အုံ မာကျစ်ကျစ်လေးအား ရစ်ချက် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ အားရပါးရ ဖျစ်ညှစ်လိုက်သဖြင့် မေလွင့် မျက်နာလေး နာကျင်မှုကြောင့် ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ “အားးးးး နာတယ်နာတယ် အီးးဟီးဟီးဟီး” ရစ်ချက်က နို့အုံနှစ်ဖက်အား ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စုပ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်ရင်း နို့သီးခေါင်းများကို ဆွဲလိမ်လိုက်သည်။ နို့ကိုင်၍ အားရသော် အောက်ခံဘောင်းဘီအား ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။
“မလုပ်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ အားဟားးဟား” မေလွင် အော်ဟစ် ရုံးကန်ရင်း ဘောင်းဘီလေး ကျွတ်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေး ပေါ်လာသည်။ ရစ်ချက်က မေလွင့် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲကားကာ ပေါင်ကြားတွင် ဒူးတုတ်ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ခါးမှာ ပတ်ထားသော တဘတ်ကို ဖြည်ကာ ခြေရင်းသို့ လှမ်းပစ်လိုက်သည်။ အရှည် 7′ ခန့် ၊ လုံးပတ်က ကျပ်လုံးခန့်ရှိသော တောင်မက် နေသည့် လီးကြီး ပေါ်လာသည်။ ရုံးကန်နေသော ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်အား လီးဒစ်ဖြင့် တေ့လိုက်သည”မလုပနွဲ့၊ မလုပပွါနဲ့!!! အငွ့!!! ဇှိဇှိဇှိ!!! အားးးးးးး” လီးဒစ် စောက်ပတ်ထဲ မြုတ်ဝင်သွားသည်။ ရစ်ချက် မေလွင့် နို့ နှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ညှစ်ကိုင်ကာ ခါးကို စောင့်ထဲ့လိုက်ပြန်သည်။ “အင့်!!! ဗျိဗျိဗျစ်!!!အားးးးးးးးးးးးးးးး” လီးမှာ တစ်ဝက်ခန့် ဝင်သွားသည်။ မေလွင့် စောက်ပတ်လေးလည်း စပါးလုံးတစ်ထောက်ခန့် ကွဲသွားသည်။ လီးဒစ်အား အပျိုမှေးက တားစီး ထားသည်။ လက်ရော ခြေထောက်ပါ ချုပ်ထားသလို ဖြစ်သဖြင့် မေလွင် အော်ဟစ်နေရုံမှ လွဲ၍ ဘာမှ မတက်နိုင်ပေ။
ရစ်ချက် အားယူကာ ခပ်ပြင်းပြင်း စောင့်ထဲ့လိုက်သည်။ “အင့်!!!ဇွိဇွိဗျိဗျစ် ဒုတ်!!!! အားးးးးး သေပါပြီအမေရဲ့” လီးကို အဆုံးထိ ဆွဲထုပ်ကာ စောင့်သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ “အင့်!!! ဗျိဗျိဗျွတ်ဗျွတ် ဒုတ် အီးဟီးဟီး နာတယ်!! နာတယ်” ရှည်လျှား ကြီးမားသော လီး ကြီးက စောက်ပတ်ထဲ အတားအဆီးမရှိ ဝင်ထွက်နေသည်။ တစ်ချက် စောင့်လိုက်တိုင်း သားအိမ်ကို အရှိန်ဖြင့် ဝင်စောင့် သောကြောင့် နာကျင်ခံခက်လွန်းကာ မျက်ဝန်းမှ မီးပွင့်မတက် ခံစားရသည်။ လီး တစ်ချောင်းလုံးလည်း စောက်ပတ်မှ သွေးများ နီရဲ နေပြီ။ ရစ်ချက်၏ စောင့်ချက်တွေ ပြင်းလွန်း၍ တစ်ကိုယ်လုံး ယိမ်းထိုးနေသည်။ “အင့်!!!! ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အားးးး ဗျစ်ဗျစ်ဗျိဗျိ အားးးးးးး ဇိဇိ ဗျွတ်ဗျွတ် အားးးး အင့်အင့်အင့်အင့် ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အားးးး ဟားးး ဟားးး ရှီးးးးးးး” ရစ် ချက်၏ လီးမှ သုပ်ရည်များ မေလွင့် သားအိမ်ထဲ ပန်းလိုက်သည်။
“Oh!!! good!!! Haaa” “ဗျွတ် ဗလွတ် ဗွတ်” လီးကြီး စောက်ပတ်မှ ကျွတ်သွားစဉ် စောက်ပတ်ထဲမှ ပျစ်ချွဲချွဲ သုပ်ရည်များ သွေး နဲ့ အတူ ရော၍ အံထွက်လာသည်။ ပုခုံးပေါ် ထမ်းထားသော ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ချလိုက်သည်။ ကျော်နိုင်ကလည်း ဒူးဖြင့် ဖိထား သော မေလွင့် လက်နှစ်ဖက်ကို ဖယ်ပေးလိုက်သည်။ “အဟင့် ဟင့်ဟင့် အီးးဟီးးးဟီးးးးဟီးးးဟီးးးး” မေလွင် မွှေ့ယာပေါ်တွင် ခြေ ကားယား လက်ကားယားဖြင့် ငိုနေသည်။ ကျော်နိုင်က မေလွင့် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်သည်။ “မလုပ်ပါနဲ့ တော့၊ နာလှပါပြီ အီးဟီးဟီးဟီးးးးး” မေလွင်၏ တောင်းပန်မှုကို လစ်လျှစ်ရှုကာ ဂေါ်လီထည့်ထားသော လီးကြီးကို တံတွေးစွတ် လိုက်သည်။ ပြီးနောက် မေလွင့် စအိုပေါက်ကို လီးဒစ်ဖြင့် တေ့ကာ “အင့်!!! ဇွိဇွိဗျိ!!! အားးး နာတယ်!! နာတယ်!! မရဘူးးး” ဖင် ပေါက်ထဲ ဒစ်မြုပ်သွားပြီ။ ထပ် စောင့်သွင်းသည်။ “ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ်!!!!! အားးးးးးးးးးးးးးးးးး”
ထိုအချိန်မှစ၍ မေလွင်တစ်ယောက် ကြေးစားလောကထဲ ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် အပေါစား တော့ မဟုတ်။ Foreigner သီးသန့်။ ကြေးကြီးသည်။ ကျယ်ငါးပွင့် Hotel တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆတ်ကာ လှုပ်ရှားသည်။ ထို သရုပ်ကိုလည်း Speaking သင်တန်းဆရာမ အနေနှင့် ဖုံးကွယ်ထားသည်။ မေလွင်၏ ရည်ရွယ်ချက်က ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ရင်း၍ ရသမျှ ပိုက်စံဆုကာ အရင်းအနှီး တစ်ခုရလာလျှင် ဒီ ဘဝမှ ရုံးထွက်ကာ အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြက်သန်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ယခု သူမ ဘဝထဲ ညီမလေး အရင်းလို ချစ်ရသော ပန်းနု ရောက်လာပြီ။ ပန်းနုအား ထိုကိစ္စ အသိပေး၍ အဖြစ်။ သူမအား အထင်သေးသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည်လေ။
မမမေလွင်အိမ်တွင် ပန်းနု ရောက်နေသည်မှာ နှစ်လရှိပြီ။ ရံဖန် ရံခါ သောကြာနေ့ ညမျိုးတွင် မမမေလွင်တစ်ယောက် အလုပ်ကိစ္စ ဟုဆိုကာ ညပြန်မအိပ်ဖြစ်။ မနက် ပြန်လာလျှင်လည်း တစ်နေကုန် အိပ်သည်။ တစ်ခါတလေ သင်တန်းပိတ်ရက် စနေနေ့တွေဆို လျှင်လည်း မနက်ကတည်းက အလှပြင်၍ ထွက်သွားကာ ညပိုင်းမှ ပြန်လာသည်။ မမမေလွင်တွင် ရည်းစားမရှိမှန်း ပန်းနု သိသည်။ မမမေလွင် ဘာလုပ်နေသည်ကို သိချင်သော်လည်း မမေးရဲပေ။ မနေ့ညကလည်း ပြန်မလာဖြစ်ဘဲ မနက် အစောကြီးမှ ပြန်လာပြီး အိပ်နေသည်။ ပန်းနုလည်း မမမေလွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မည်စိုး၍ ထမင်းဟင်း ချက်ပြီး TV ရှေ့ထိုင်ကာ မနေ့ညက TV စဉ် အောက်တွင် တွေ့ရသော အပြာကားခွေကို ပြန်ကြည့်နေမိသည်။ မမမေလွင်ထံတွင် ယခုလို ခွေတွေ တွေ့တာ ပထမ အံ့သြမိ သော်လည်း ခုခေတ် လူငယ်ဘဲလေဟု တွေးမိကာ ကြည့်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် နီဂရိုးသုံးယောက်နှင့် အဖြူမ တစ်ယောက်3Some ဆတ်ဆံပုံကို အပီအပြင် ရိုက်ပြထားသည်။ နီဂရိုးများ၏ လီးတွေက သံချောင်းကြီးများသဖွယ် မာတောင် ရှည် လျှားကာ တုပ်လွန်းလှသည်။ အဖြူမလေးခမျာ တအားအားနှင့် ညည်းညူရင်း ဖင်၊ စောက်ပတ်နှင့် ပါးစပ် သုံးပေါက်လုံး အလိုးခံ နေသည်။ ပန်းနု ကြည့်ရင်း အသည်းတွေယားကာ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ စိမ့်ထွက်လာသည်။
“တူတူတူတူ” “Hello!!! မေလွင်ရေ၊ ဒီကနေ့ date ထားတဲ့ foreigner တွေရှိတယ်၊ ကြေးကတော့ ——- အခန်းနံပါတ်က ——- နေ့လည် 10:00 am မှာတွေ့မယ်တဲ့” ပန်းနု ဘာမှ ပြန်မဖြေနိုင်ခင် တစ်ဖက်မှ ပြောဆိုကာ ဖုန်းချသွားသည်။ ပန်းနု မမမေ လွင်၏ hand phone ကို ရင်ခွင်မှာအပ်ကာ မျက်ရည်များ ကျလာသည်။ “မမရယ်” နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ နံက် 8:30 am သာရှိသေးသည်။ အခန်းတံခါးကို အသာလေး ဖွင့်လိုက်သည်။ မမမေလွင် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေသည်။ ပန်းနု ဆုံးဖြက်ချက် တစ်ခုကို ချလိုက်ကာ မမမေလွင်၏ နှဖူးကို နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ ကြယ်ငါးပွင့် Hotel ကြီးသို့ ပန်းနု ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ချိန်းဆိုထား သော room no. သို့ တန်းသွားခဲ့သည်။ ပန်းနု ရင်ခုံစွာဖြင့် လူခေါ် bell ကို နှိပ်လိုက်သည်။ “တင်းတောင်!!! တင်းတောင်” “ကျွီ!!!! Hello” အရပ်ရှည်ရှည်နှင့် foreigner တစ်ယောက် ထွက်လာသည်။
“Hi” “Please come on” “yes” အခန်းထဲ ဝင်လိုက်သည်။ စုစုပေါင်း foreigner သုံးယောက်။ သူမ ခြေဖျား လက်ဖျားများ အေးစက်နေသည်။ “Are you Mrs. May Lwin?” “No. I’m Pann Nu. Mrs. May Lwin is ill, so I come here replace for her.” “Ok. ok. never mind. You are young and beautiful. We like you.” “Thank, sir” Foreigner တစ်ယောက် ငှဲ့ ပေးသော အရက်ခွက်ကို မော့လိုက်သည်။ “ဟားးးး” လည်ချောင်းထဲ ပူဆင်းကာ အနည်းငယ် နွေးထွေးသွားသည်။ Air com က လည်း အားကောင်းလှသည်။ စကားများ ပြောဆိုကြရင်း နောက်တစ်ခွက် ထပ်သောက်သည်။ စိတ်လည်း အနည်းငယ် ရဲတင်းလာ သည်။ “Ok, just start now” Foreigner နှစ်ယောက်က ပန်းနု၏ ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ဝင်ထိုင်သည်။ တစ်ယောက်က ပန်းနု၏ မျက်နှာအား ဆွဲလှည့်ကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။
“ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အင်းဟင်းဟင်းဟင်း” နောက်တစ်ယောက်က သူမ၏ နို့အုံကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေသည်။ သူမ၏ အင်္ကျီ ကြယ်သီးများ တစ်လုံးခြင်း ဖြုတ်နေသည်။ “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အင်းဟင်းဟင်း” ပါးစပ်ကို နမ်းရင်း လျှာကို စုပ်ခံရသဖြင့် ပန်းနု မျက်လုံးများ မှေးစင်းသွားသည်။ ပန်းနု၏ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းလည်း ဗလာကျင်းသွားသည်။ နို့တစ်ဖက်ကို ဖွဖွလေး စုပ်နယ်ပြီး ကျန်နို့အုံကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ခြင်း ခံနေရသည်။ Foreigner တစ်ယောက်က ပန်းနု ပေါင်ကြား ဒူးထောက်ကာ စကပ်နှင့် အောက်ခံ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ပန်းနု၏ စောက်ပတ်လေးကို လက်ဖြင့် ဖြဲလိုက်သည်။ နီရဲနေသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသား ကို လျှာဖြင့် ထိုးမွှေကာ လျှက်လိုက်ရာ “ဟားးးးး ကှတွ ရှီးးးးးးး” နို့ရော စောက်ပတ်ပါ အစုပ်ခံရသဖြင့် တခါမျှ မခံစားဘူးသော အရသာကို ခံစားနေရသည်။ ပါးစပ်ကို နန်းနေသူက ပန်းနု၏ လည်တိုင်ကို စုပ်ရင်း လျှာဖြင့် ကလိနေသည်။
“ပြွတ် ရှလွတ်!!! ရှ လူးးးးး အားးးး ရှီးးးး” စောက်ပတ်အား ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ခံရ၍ အတွင်းသားနုနုများ အမြုံလိုက် ပြုတ်ပါသွားသလို ခံစားရပြီး ရင်ထဲ တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေသည်။ စောက်ပတ်ကို လျှက်ရင်း လက်ညှိုး တစ်ချောင်းက စအိုပေါက်ကို ထိုးမွှေနေရာ ပန်းနု ခါးလေး ကော့ ကော့သွားသည်။ အမျိုးသား သုံးဦး၏ အထိအတွေ့ အကိုင်အတွယ်ကို ရေရှည် တောင့်မခံနိုင်တော့ဘဲ “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အအအ ရှ လွတ် ပြွတ် ပလပ်လပ် ပျစ် အားးးး ရှီးးးး ဟားးးး အဟင့်ဟင့်ဟင့်” ပန်းနု စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ ပန်းထွက်ကာ တစ်ချီ ပြီး သွားသည်။ Foreigner သုံးယောက်လည်း အဝတ်များ ချွတ်လိုက်ရာ ပန်းနု မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ လီးကြီးတွေက အရှည် 7′ ခန့်၊ လုံးပတ်က သူမ လက်ဖျံခန့် တုပ်သည်။ ဒါကြီးတွေကို ခံနိုင်ပါ့မလား။
ပန်းနု တွေးနေချိန်တွင် Foreigner သုံးယောက်က သူမနား မတ်တပ်ရပ်လိုက်သဖြင့် သုံးယောက် အလယ်တွင် ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည်။ မနက်က ကြည့်ထားသည့် အပြာကားထဲမှ ပြကွက် အတိုင်း သူတို့၏ လီးကို စုပ်ပေးရတော့မည်လေ။ မျက်နှာရှေ့ တည့်တည့်ရှိ လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ အရည်ပြားကို ဆွဲလိုက်ရာ နီရဲ ပြဲအာနေသော ဒစ်ကြီး ပေါ်လာသည်။ ဒစ်ကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ငုံကာ လျှာဖြင့် ဝိုက်လိုက်သည်။
“ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် Ohh yes ရှီးးးးးး” ကျန် လီးနှစ်ချောင်းကို လက်ဖြင့် ကိုင်ကာ ကွင်းတိုက်ပေးသလို ရှေ့တိုးနောက်စုပ် လုပ် ပေးသည်။ “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အားးဟားးးး” ဒစ်ကို စုပ်လိုက်၊ လိင်တန်ကို လျှာဖြင့် လျှက်လိုက်ဖြင့် လီးသုံးချောင်းကို အလှည့်ကျ စုပ်ပေးနေသည်။ 15 mins ခန့်ကြာသော် လီးစုပ်တာ ရပ်လိုက်ပြီး သူမအား မွှေ့ယာပေါ် ပွေ့တင်လိုက်သည်။ ပန်းနု ပေါင်ကားပြီး လှဲ လိုက်သည်။ တစ်ယောက်က ပန်းနု ပေါင်ကြားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ မြွေဟောက်ကြီး မာန်ဖီနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသော လီးဒစ်ကြီး ဖြင့် ပန်းနု စောက်စိကို ပွတ်တိုက်လိုက်ရာ “အ” ပန်းနု ကိုယ်လေး တွန့်သွားသည်။ လီးဒစ်ကြီး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လာပြီ။ ပန်းနု လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စုပ်ကာ မျက်စိမှိတ် အံကြိတ်ထား၏။
“အင့်!!! ဗျွတ်ဗျွတ်ဗျိဗျိ!!!! အူးးးဟူးးဟူး” အရည်ရွှဲနေသော စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီးက အတားအဆီးမဲ့စွာ အဆုံးထိ ဝင်သွား သည်။ လီးကြီးမှာ ရှည်လျှားလွန်းသဖြင့် သားအိမ်အောင့်သွားသည်။ “အင့်!!! ဗျိဗျိဇွိဇွိ!!! အားးးးးးး ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ်!! အားးးး ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အအအအ ဇွိဇွိဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ” လီးအထုပ်အသွင်းတိုင်း စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားများ အမြုံလိုက် ကပ်ပါသွားလိုက် ရှုံ့ဝင်သွားလိုက် ဖြစ်နေသည်။ Foreigner လည်း လိုးရတာ စီးစီးပိုင်ပိုင်နှင့် အရသာ ရှိလှသည်။ စောင့်ချက်တွေ ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် ပန်းနု ကိုယ်လုံးလေး ယိမ်းထိုးနေသည်။ “ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဇွိဇွိဗျစ်ဗျစ် အအအအ ဗျိဗျိဇွိဇွိ အအအအ အားးးး ဟားးးး ရှီးးးး on yes ဟားးးးး” ပန်းနု ဗိုက်ပေါ် သုပ်ရည်များ ပန်းထုပ်လိုက်သည်။ တစ်ယောက် ပြီးသွားသည်နှင့် နောက် လီးတစ်ချောင်းက စောက်ပတ်ထဲ တန်းဝင်လာသည်။
“အင့်!!! ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အားးးးးးး” သုံးယောက်လုံး လိုးပြီးသွားသော် ပန်းနုလည်း မွှေ့ယာပေါ် ခွေခွေလေး ဖြစ်နေသည်။ သားအိမ် အောင့်လွန်းသဖြင့် လက်နှင့် ဖိကာ ကွေးကွေးလေး နေနေရသည်။ 15 mins ခန့် နားပြီးသော် တစ်ယောက်က မွှေ့ယာပေါ် တက်လာကာ ပန်းနုကို လေးဘက် ကုန်းခိုင်းသည်။ ကုန်းထားသော ပန်းနု ဖင်နောက်တွင် ဒူးထောက်ကာ စအိုပေါက်ကို လျှာဖြင့် ထိုးမွှေလိုက်သည်။ “အ အ” ပန်းနု ဖင်လိုးခံရတော့မည်ကို သိသဖြင့် ထိတ်လန့်နေမိသည်။ ဖင်ပေါက်ကို စိတ်ကြိုက် လျှက်ပြီး လီးဒစ်ဖြင့် တေ့လိုက်သည်။ ပန်းနု အံကို တင်းတင်းကြိတ်ထားသည်။ “ဇှိဇှိဗှိ!!! အီးးးးးးး” လီးဒစ်ကြီးက ဖင်ပေါက်ထဲ မဆန့်မပြဲ ဝင်လာသည်။ အံကြိတ်ထားရလွန်း၍ မျက်နှာကြီး နီမြန်းကာ လည်ပင်း အကြောများပင် ထောင်လာသည်။
“အင့်!!! ဗျွတ်ဗျွတ်ဗု!!! အားး လားး လားး နာတယ် နာတယ် အီးးး” လီးတစ်ဝက်ခန့် ဝင်သွားသည်။ နာကျင်လွန်း၍ ပန်းနု ခေါင်း များ ခါယမ်းနေသည်။ “အင့်!!!! ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ် အူးးး ဟူးးး ဟူးးး သေပါပြီ အမေရဲ့ ဖင်ကွဲပါပြီတော့ အီးဟီးဟီးဟီးးးးးးး” လီး အဆုံးထိ ဝင်သွားပြီ။ Foreigner က ပန်းနု ခါးကို စုံကိုင်ကာ မီးကုန် ယမ်းကုန် လိုးတော့သည်။ “အင့်!!! ဗျိဗျိဇွိဇွိ!!! အားးးးးးး ဗျွတ် ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ်!! အားးးး ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အားးးလားး လားးး ဇွိဇွိဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ အားးးးးးး” ပန်းနု ငယ်သံပါအောင် အော် နေရသည်။ အချက် 20 ခန့် အားရပါးရ စောင့်ပြီးသော် လီးကို ဖက်ပေါက်ထဲမှ ထုတ်လိုက်သည်။ “ဗျွတ် ဗလွတ် ဘူ!!! အီးးဟီးး ဟီးးး” ဖင်လိုးနေတဲ့ foreigner က မွှေ့ယာပေါ် ပတ်လတ်လှန်အိပ်ကာ ပန်းနုကို အပေါ်မှ တက်စောင့်ခိုင်းသည်။ “ဖတ်ဖတ်ဖတ် ဖတ် အအအအ ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ဇွိဇွိဗျိဗျိ အအအအ” နောက်တစ်ယောက်က ပန်းနု စအိုကို လီးဖြင့်တေ့ကာ စောင့် သွင်းသည်။
“အင့်!!! ဗျိဗျိဇွိဇွိ!!! အားးးးးးး ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ်!! အူးးးး ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အားးးလားး လားးး ဇွိဇွိဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ အားးးးးးး” စောက်ပတ်ထဲရော ဖင်ထဲပါ လီးနှစ်ချောင်း ပင်စတင် ခုတ်သလို စီးချက်ညီညီ ဝင်ထွက်နေသည်။ ပန်းနုလည်း နာကျင် မှုနှင့်အတူ သူမတူသော ခံစားမှကို ရရှိသဖြင့် အော်ဟစ် ညည်းညူနေရသည်။ ကျန်တစ်ယောက်၏ လီးက မျက်နှာအနီး ရောက်လာ သဖြင့် ပါးစပ် ဟပေးလိုက်ရာ “အင့်!!! ဗျိဗျိဇွိဇွိ!!! အုအု အွတ်အွတ် ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ်!! အူးးးး ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အုအု အားးးးးး ဇွိဇွိဗျွတ်ဗျွတ် အအအအ အားးးးးးး” Foreigner သုံးယောက်၏ မညှာမတာ လိုးသည့်ဒဏ်ကို တစ်နေကုန်အောင် လှိမ့်ခံ ခဲ့ရသဖြင့် စောက်ဖုတ်ရော ဖင်ပေါက်ပါ ပူထူနေပြီ။ ခံတွင်းထဲလည်း သုပ်ညှီနံ့တွေ လှိုင်နေသည်။ အကြိမ်ကြိမ် ပြီးခဲ့ရသဖြင့် ဒူးများ ချောင်ကာ နားထဲမှ လေများ ထွက်နေသည်။ ညနေ 4:00 pm မှ လိုးပွဲရပ်သွားသည်။
ပန်းနုနှင့် မေလွင်လည်း မထူးဇာတ်ခင်းကာ Foreigner သီးသန့် order လိုက်ရင်း ရသမျှ ငွေစုသည်။ တစ်နှစ်ခန့် ကြာသော် ရရှိလာ သော အရင်းအနှီးဖြင့် ပြင်ဦးလွင်တွင် ခြံဝန်းလေးဝယ်ကာ အထည်ဆိုင်လေးနှင့် speaking သင်တန်း တွဲဖွင့်ပြီး ဇာတ်မြှုတ်နေကြ သည်။ မမမေလွင်က နှစ်ပတ် တစ်ကြိမ် မန္တလေးသို့ ဆင်းကာ ဆိုင်အတွက် ပစ္စည်းများ ဝယ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် အခေါက်က ကျမ္မာ ရေး လိုအပ်ချက်အရ သွေးစစ်မည်ဟု ဆိုသဖြင့် သွေးဖေါက်ပေးလိုက်ရသည်။ ဒီကနေ့လည်း မမမေလွင် ပြန်အလာကို မျှော်ရင်း ခြံ ထဲတွင် သစ်ပင် ရေလောင်းနေသည်။ “တီတီတီ” “လာပြီ မမရေ” “ဧည့်သည်ပါတယ် ပန်းနုရေ” “ကျွီ” “ဟင်” ပန်းနု ကြက် သေ သေသွားသည်။ မမမေလွင်ဘေးမှ ဆင်းလာသူက မောင်မောင်။ သူမ အသက်တမျှ ချစ်ရသော မောင်မောင်။ ပန်းနု သတိ ဝင် လာကာ အိမ်ထဲ ပြေးဝင်သည်။ မောင်မောင် အနောက်က ပြေးလိုက်ကာ ပန်းနု လက်မောင်းကို ဆွဲပြီး ရင်ခွင်ထဲ ဖက်ထားလိုက် သည်။
“ဘာလို့ ပြေးတာလည်း ပန်းနုရယ်” “လွှတ်!! ပန်းနုကို လွှတ် အီးဟီးဟီး ပန်းနု ခန္ဓာကိုယ်က မသန့်စင်တော့ဘူး အီးဟီးဟီးဟီး” “ကိုယ်ချစ်တာ ပန်းနုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မဟုတ်ဘူးလေ။ ပန်းနုကို ချစ်တာလေ။ ကိုယ့်ကို ခွဲမသွားပါနဲ့တော့ကွာ” “အဟင့်ဟင့်ဟင့်” “ကိုယ်လည်း ပန်းနု ပျောက်သွားထဲက စိတ်လေပြီး လုပ်ခြင်ရာလုပ်၊ မိန်းမ တကာနဲ့ အိပ်ခဲ့တာဘဲ၊ ပန်းနုကို ကိုယ် ခွင့်လွှတ် နားလည်တယ်၊ ချစ်လည်း ချစ်တယ်” “ဟုတ်တယ် ညီမလေး၊ ညီမလေး အိမ်က ထွက်လာကတည်းက မောင်မောင် လိုက်ရှာနေ တာ အရူးတပိုင်းဘဲ၊ မမတို့ ပြင်ဦးလွင် ရောက်ကတည်းက ညီမလေး မျက်နှာ ညှိုးနေတာ မကြည့်ရက်လို့ မန္တလေး ရောက်တိုင်း မောင်မောင့် အကြောင်း စုံစမ်းခဲ့တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့လက လမ်းမှာ တွေ့ရင်း ပန်းနုကို တွေ့ခြင်ကြောင်း၊ သူ လိုက်ရှာနေကြောင်း ပြော တယ်၊ မမက ပန်းနုရော မောင်မောင်ပါ သွေးစစ်လို့ Ok မှ ပေးတွေ့မယ်လို့ ပြောထားတာ”
“ဒါ ဒါဆို” “ဟုတ်တယ် ညီမလေး၊ မမတို့ သွေးစစ်တာ result က ok တယ်” “ဟုတ်တယ် ပန်းနုရဲ့၊ ဦးမြအောင်တို့လည်း ဖရိုဖရဲ တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်၊ ကျော်နိုင် ဖဲဝိုင်းတစ်ခုမှာ ဓါးထိုးခံရလို့ သေသွားတယ်။ ဦးမြအောင်လည်း ပစ္စည်းတွေ အဖမ်းခံရလို့ ဘဝတွေ ပျက်ကုန်ရော၊ နောက်ဆုံး စုစုကို အကြွေးရှင် နိုင်ငံခြားသားတွေက ဝိုင်းပြီး မုဒိန်းကျင့်လိုက်တာ သွေးလွန်ပြီး သေသွားတယ်၊ ဦးမြ အောင်လည်း သမီးစိတ်နဲ့ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပြီး သေရော” “အို စုစု ညီမလေးရယ် အဟင့်ဟင့်” “စုစုလေးအတွက် စိတ်မကောင်း ပေမယ့် ဦးမြအောင်တို့ ဝဋ်လည်တာဘဲလေ” “ကဲ မငိုပါနဲ့တော ပန်းနုရယ်၊ ကိုယ့် ရင်ခွင်ထဲမှာ မင်းမျက်ရည် ထပ်မကျစေရတော့ပါ ဘူးကွယ်” “ပြတ်ပြတ်ပြတ်” “အိုးးး မမရှိတယ်လေ” “ရှိ ရှိကွာ၊ ဒီက လွမ်းနေရတာ ကြာပေါ့ ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်” မောင်မောင် ပန်းနု၏ ပါးနှစ်ဖက်ကို အနမ်းမိုးတွေ ချွေနေသည်။
“မောင်မောင်နော် ပြောလေ ကဲလေ အဟွန်း” ချစ်သူနှစ်ဦး ကြည်နူးနေသည်ကို ပြုံး ကြည့်ရင်း မေလွင် ခြံထဲ ရှောင်ထွက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ မုန်တိုင်း ပြီးလို့ ပန်းတွေ ပွင့်နေပြီလေ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဝဋျလညျခွငျး